सीमा ह्वाङ्ग पार्ने खेलमा सशस्त्रका आइजी खनाल सरकार सोध्दैछ- पहाडमा फौज किन छरेको?
खिलानाथ ढकाल काठमाडाैं - बुधबार, असार १०, २०७७
दुई देशबीचको सीमा खुला हुन सक्छ, त्यसको अर्थ त्यहाँ सुरक्षा कमजोर भए पनि फरक पर्दैन भन्ने होइन। खुला सीमालाई सुरक्षित राख्न झन् बढी स्रोत, योजना र तत्परता चाहिन्छ।
नेपाल-भारत सीमा खुला र सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर भएको ज्ञातव्य छ। तर, यसलाई झन् ह्वाङ्ग बनाएर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर असर पुर्‍याउने काममा सशस्त्र प्रहरी बल स्वय‌ं सक्रिय भएको निष्कर्षमा आयोमेल अनुसन्धान पुगेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षाको वर्तमान चुनौती आँकलन नै नगरी सीमा नाकामा क्रियाशिल रहेको आधा सुरक्षा फौजलाई पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा विकेन्द्रित गरेको भेटिएको छ।
खासगरी शैलेन्द्र खनाल महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि क्रमिक रूपमा सीमा नाकाको फौजलाई दुर्गमका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा खटाउन थालिएको आँकडा देखिएको छ।
२०६४ सालदेखि कायम रहेका सीमाका ८७ वटा स्थायी बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)लाई मुख्यालयले २०७५ सालयता अस्थायी बनाएको छ। ती ८७ स्थायी पोस्ट प्रत्येकमा ५० जनाको दरबन्दी थियो। ती पोस्ट अस्थायी बनाइएपछि त्यहाँको आधा जनशक्ति अहिले पहाडी र हिमाली जिल्लामा छ।
महानिरीक्षक खनालले सीमाको जनशक्ति विकेन्द्रित गर्ने योजनाअनुसार गृह मन्त्रालयलाई राजी गराउने क्रममा सीमामा बिओपी आवश्यक नरहेको तर्क पेस गर्दै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार भइरहँदा उनले सीमा सुरक्षाभन्दा विद्रोही विप्लव समूहको चुनौती पहाडी क्षेत्रमा बढी रहेको भन्दै ‘मिसगाइड’ गरेको सरकारलाई यतिबेला महसुस भएको गृहका उच्चाधिकारीहरू बताउँछन्।
छिमेकी भारतसँग लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानीको विवाद बल्झिएर सरकारको ध्यान फेरि सीमातिरै फर्केको अवस्थामा गत वर्ष मात्रै सशस्त्र फौजलाई पहाडतिर सारिएको विषयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।
‘संसारका कुनै पनि सीमा नाकामा स्थायी बिओपी छैन, नेपालमा चाहिँ किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने तर्क गरियो,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘२०७५ सालमा गरिएको ओएन्डएम कार्यान्वयनमा आएपछि सीमामा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति न्यून बन्दै गएको छ।’
अहिले भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा सशस्त्रका १२९ अस्थायी पोस्ट छन्। यी पोस्टमा प्रत्येकमा बढीमा ३५ जना जनशक्ति छ। अस्थायी भइसकेपछि जति थोरै जनशक्ति राखे पनि फरक पर्दैन र तिनको अनुगमन समेत हुँदैन। स्थायी बिओपी हुँदा तोकिएको दरबन्दी ५० जना खटाउनै पर्ने नियम थियो।
सीमा खुकुलो छाडेर विकट पहाडमा सशस्त्र प्रहरी छर्नुपछाडिले युद्धकालपश्चात् यो अर्धसैन्य संगठनभित्र निरन्तर हुर्कंदै आएको अनियमितताको संस्कृति उजागर भएको छ। तत्कालीन माओवादी विद्रोहीसँग लड्न गठित नयाँ सुरक्षाफौजले द्वन्द्वको अन्त्यपछि अस्तित्वको प्रश्नसँग जुधिरहँदा वि.सं. २०६४ देखि सीमा सुरक्षाको प्रष्ट म्यान्डेट पाएको थियो।
सीमा सुरक्षाकै म्यान्डेटमा परिपक्व बन्दै जानुपर्नेमा उल्टै सीमा छाडेर अनौठा ठाउँहरूमा छरिनुलाई जानकार अधिकारीहरूले आर्थिक ‘लोभ’सँग समेत जोडेका छन्। विकट स्थानमा खटिने जवानहरूलाई लामो समय घर बिदा पठाएर उनीहरूको रासन खर्च हत्याउने फौजका हाकिमहरूको प्रवृत्ति संगठन प्रमुखबाट संरक्षित रहँदै आएको छ।
स्थायी संरचना हटाएर जनशक्ति पहाडी जिल्लामा पठाउँदा सीमा सुरक्षा कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रै छ। २०६४ सालदेखि ती स्थायी पोस्ट कायम रहेकोमा प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि खनालले मात्र किन अनावश्यक देखे भन्ने प्रश्न उठेको छ।
भएको जनशक्ति विकेन्द्रीकृत गरेका उनै खनालले कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड-१९) का कारण सीमा नाका बलियो बनाउन गृह मन्त्रालयले तयारी थाल्दा ९ हजार दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरेकाे छ।
सीमा नाकामा २२१ बिओपी बनाउनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै छ। गत मंसिर २० गते मन्त्रिपरिषद्ले बिओपी संख्या बढाउने निर्णय गरेको थियो। जतिबेला भारतले भर्खरै लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनमा सशस्त्र प्रहरी बलले चासो देखाएन। जब भारतले लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र हुँदै खनेको बाटो नै उद्घाटन गर्‍यो, त्यसपछि मात्र बिओपीको प्रसङ्ग उठ्यो।
गृहका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय त्यतिबेलै कार्यान्वयन गरेको भए कम्तीमा भारतले लिपुलेक-कालापानी समेटेर सडक खनेको सूचना समयमै सरकारलाई पुग्ने थियो।
जतिबेला भारतले लिपुलेक-कालापानीमा सडक उद्घाटन गर्‍यो, मुलुक कोरोना महामारीग्रस्त थियो। तैपनि, सशस्त्र प्रहरी बिओपी बढाउने पक्षमा काम गरिरहेको थिएन। गृह मन्त्रालयले महामारीले सीमा सुरक्षा कमजोर बनेको निष्कर्षसहित बैठक बोलाएर बिओपी थप्न निर्देशन दियो, महानिरीक्षक खनालले त्यो काम फत्ते गर्न दरबन्दी थपको सर्त तेर्स्याए।
कोभिडले अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला दरबन्दी थप्न गरिएको प्रस्ताव तुरून्तै साकार हुने अवस्था छैन। त्यही कठिनाइलाई आधार बनाई जनशक्ति अभाव दर्शाएर सीमामा सुरक्षा केन्द्रित गर्न आनाकानी गर्ने बहानामै खनालले गृहसमक्ष यो प्रस्ताव राखेको बुझाइ अधिकारीहरूको छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण दक्षिणी सीमा नाका खुकुलो बनेको निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गत वैशाख २२ गते बैठक बोलाएको थियो।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न जनशक्ति थप्नुपर्ने माग खनालले राखेका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग खनालले ९ हजार दरबन्दी थप्न प्रस्ताव राखेका थिए। बिओपी र जनशक्ति थप्दा ९ अर्ब बजेट चाहिने भन्दै खनालले गृहमा राखेको प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।
भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा कमजोर भएको तथ्य गृहको तयारीले पनि देखाउँछ। गृहमन्त्री थापाका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट ५०० स्थानमा स्थापना गरिने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत प्रथम चरणमा २२१ वटा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना कार्य अगाडि बढिरहेको छ।
‘आजका मितिसम्म दार्चुलाको छाङ्गरु र हुम्लाको हिल्सासमेत गरी १२९ स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना भइसकेको छ,’ गृहमन्त्री थापाले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा जेठ २७ गते संसदमा भने।
थापाले आगामी आर्थिक वर्ष ६९ वटा बोर्डर आउट पोस्टको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी यस वर्ष बजेट विनियोजन भएको जानकारी संसदमा दिएका छन्। बिओपी निर्माण गर्दा आधुनिक हातहतियार तथा उपकरणसमेत राख्नुपर्ने माग सशस्त्र प्रहरीको छ। यस हिसाबले पनि महानिरीक्षक खनालले बजेटको सिलिङ उकालो देखाएका छन्।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाको सुरक्षा गर्ने विषय प्रादेशिक प्रहरीबाट सम्भव छैन। यो बुझेको गृह मन्त्रालयले सशस्त्रको जनशक्तिलाई सीमानाकामा केन्द्रित गर्ने उपयुक्त मौका कोभिड संकटको बेला देखेको छ।
तर, महानिरीक्षक खनालले गृहको तयारी र विश्लेषणलाई जनशक्ति थप्ने सर्तमा अल्मल्याउन खोजेका छन्। भएको जनशक्ति ‘अनुत्पादक’ ठाउँमा खटाएर दरबन्दी थप्ने योजना ल्याई राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थोपर्नु व्यावहारिक नहुने तर्क सम्बद्ध अधिकारीहरूको छ।
‘नेपाल प्रहरीको संघीय संरचनाले सीमा सुरक्षाको विषयमा प्राथमिकता नपाउने वर्तमान अवस्थामा बिओपीहरूको अनाश्रित संरचना खारेजी र अस्थायीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अवमूल्यन गरेको छ,’ सशस्त्र प्रहरीकै बहालवाला एक अधिकारीले भने।
भारतले सीमानाकामा ५ सय ३० पोस्ट राखेको छ। त्यसको अनुपातमा नेपालमा अहिले रहेका सशस्त्र प्रहरीका पोस्ट धेरै न्यून मानिन्छ।
सीमामा भारतको सुरक्षा रणनीति बलियो छ। भारततर्फ हरेक अढाइ किलोमिटरमा बिओपी छन्।
तीनवटा बिओपीलाई हेर्ने एउटा गुल्म छ। तीन गुल्म हेर्ने एक रेजिमेन्ट छ। तीन रेजिमेन्टलाई हेर्ने एउटा सेक्टर हेडक्वाटर नै छ।
खनाल आइजिपी भएपछि २०७५ मै राजमार्ग सुरक्षाका १२ वटा गण नै विस्थापन गरियो। प्रतिगण ७६१ जनशक्ति रहेकामा खनालले ती सबै गण विस्थापन गरेर जनशक्ति पहाडी जिल्लामा खटाएका छन्।
ती गण मेचीदेखि महाकालीसम्मै फैलिएका थिए। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, बारा, पर्सा, नवलपरासी, नेपालगन्ज, कैलाली, कञ्चलनपुरसम्म रहेका राजमार्गका गणमध्ये केहीमा अहिले शिक्षालय छन्, बाँकी अस्तित्वमा छैनन्।
त्यो जनशक्तिले राजमार्गमा हुने अपराध, चोरी, तस्करी, राजश्व चुहावट साथै आवश्यक पर्दा सीमा सुरक्षामा पनि मद्दत दिने गरेको थियो। ती गणको जनशक्ति अहिले हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, रोल्पा, दुवै रुकुमलगायत जिल्लामा छ।
सो जनशक्ति विकेन्द्रीकृत गर्दा विप्लव माओवादीबाट सुरक्षा चुनौती रहेको दाबी खनालले गरेका छन्। रुकुम र रोल्पाका केही स्थानमा विप्लव समूहको सामान्य प्रभाव रहे पनि नेपाल प्रहरीले नै उसको गतिविधि निष्प्रभाव तुल्याइसकेको छ।
विस्थापित गरिएका एक दर्जन गणको जनशक्ति ९ हजार १३२ छ। यो जनशक्ति अहिले तराईमा भएको भए सशस्त्र मुख्यालयले सीमा नाकामा खटाउन थप जनशक्ति माग्नु पर्दैनथ्यो। बिओपी थप्दा अहिले तत्काल सोही जनशक्ति पुनः तराई झार्नुपर्ने भएको छ। यसले दोहोरो खर्चसमेत निम्त्याएको छ।
सीमामा आवश्यक परेको यसैबेला ‘अनुत्पादक’ ठाउँमा रहेको सोही दरबन्दी प्रयोग गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, आइजिपी खनाल यो जनशक्ति चलाउन चाहँदैनन्, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न उनको सक्रियता बढी देखिन्छ।
राजमार्ग तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणमा खटिने प्रहरी पहाडी जिल्लामा किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने सवाल सशस्त्र प्रहरीभित्र यदाकदा उठ्ने गरेको पनि छ। तराई तथा सीमामा काम लाग्ने जनशक्ति पहाडमा पठाउँदा सीमामा अस्थिरता चाहने शक्तिकेन्द्रहरूलाई फाइदा पुगेको विश्लेषण संगठनमा छ।
सशस्त्र प्रहरीका अर्का एक अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षामा सशस्त्र सुरक्षा बलको तैनाथीको ‘लोकेसन’ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यसअनुसार विगतमा नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई अध्योपान्त समेट्ने गरी सशस्त्र प्रहरी बलको ‘रणनीतिक’ तैनाथी थियो।
जसका कारण देशको भौगोलिक बनावट अनुसार पनि तराई र पहाड दुवैतर्फ सुरक्षा चुनौती बढेको अवस्थामा छोटो समय अवधिमै तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने अवस्था थियो। ‘तथापि, रिइन्फोर्समेन्टका लागि २४ घन्टै स्ट्यानबाइको तैनाथीलाई विस्थापित गरियो,’ ती अधिकारीले आयोमेललाई भने, ‘यसले अन्ततोगत्वा हाइवेको मात्र नभएर त्यहाँबाट सीमा नाकाको सुरक्षामा दिइने पहरालाई निरूत्साहित गरेको देखिन्छ।’
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलले खेलकुद शिक्षालयको स्थापना गरेर ४६३ जनको जनशक्ति अनुत्पादक ठाउँमा खटाइएको छ। जुन जनशक्तिमा १३-१४ वटा बिओपी नै स्थापना गरी सीमामा तैनाथ गर्न सकिन्छ।
तथापि, सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले भने संगठन संरचनाको सर्वेक्षणबाट आवश्यक परेरै तराईको जनशक्ति पहाड पठाइएको तर्क गरेको छ। ‘तराईबाट पहाडी जिल्लामा जनशक्ति परिचालन अनुत्पादक भन्ने हुँदैन, त्यो जनशक्ति आवश्यकताअनुसार अहिले तराई र सीमा सुरक्षामा खटाइराखेकै छौं,’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रवीण श्रेष्ठले भने।
भारतसँग सबैभन्दा बढी सीमा जोडिएको प्रदेश नम्बर २ हो। ओएण्डएमअघि त्यो प्रदेशमा ७०८२ जनशक्ति थियो। पछि घटाएर ६१०३ कायम गरिएको छ। सीमानामा सो प्रदेशका आठै जिल्लामा २३५२ जनशक्ति त स्थायी रूपमै बिओपीमा खटिन्थ्यो। बिओपी अस्थायी गरेपछि त्यहाँ खटिने जनशक्ति नजिकको गणले खटाउने संख्यामा निर्भर हुनुपरेको छ।
गृहका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने ओएन्डएममा सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि पनि हुन्छ। २०७५ सालमा ओएन्डएम गर्दा सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरज श्रेष्ठ प्रतिनिधि थिए। यसको अर्थ ओएन्डएम गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलले राख्ने रायले निर्णायक भूमिका खेल्छ।
मुख्यालयबाट प्राप्त ओएन्डएमअघि र पछिको राजमार्ग तथा सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितिको तथ्यांक हेरौं।
ओएन्डएमपछि बिओपीका लागि स्थापित सीमा सुरक्षाका कार्यालय नै हटाइएको छ। ती जिल्लामा सीमा सुरक्षाका लागि गणबाट अस्थायी रूपमा प्रहरी परिचालन गर्ने गरिएको छ।
भारतसँग सबैभन्दा बढी सीमा जोडिएको प्रदेश नम्बर २ हो। ओएन्डएमअघि त्यो प्रदेशमा ७०८२ जनशक्ति थियो। पछि घटाएर ६१०३ कायम गरिएको छ।
सीमानामा सो प्रदेशका आठै जिल्लामा २३५२ जनशक्ति त स्थायी रूपमै बिओपीमा खटिन्थ्यो। बिओपी अस्थायी गरेपछि त्यहाँ खटिने जनशक्ति नजिकको गणले खटाउने संख्यामा निर्भर हुनुपरेको छ।
प्रदेश नम्बर १ का झापा, मोरङ र सुनसरी तीनवटै जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएका छन्। ओएन्डएमअघि ती जिल्लामा हाइ-वे सीमामा ४३३८ जनशक्ति थियो।
ओएन्डएमपछि ती जिल्लामा २८३८ जनशक्ति कायम गरिएको छ।
ओएन्डएमअघि सो प्रदेशमा बिओपीमा ७६८ जनशक्ति स्थायी रूपमै सीमानाकामै खटिन्थ्यो।
हेर्नुहोस्, सबै प्रदेशको तालिका
यो आँकडाले सीमानाकामा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले आफ्नो प्रभाव खुम्च्याउँदै गएको देखाउँछ।
नेपाल भारतबीच लगभग १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ।
योमध्ये करिब ६ सय ४७ किलोमिटर जति सिमाना नदीसँग गाँसिएका छन्। जहाँ प्रदेश २, ५ सुदूरपश्चिम प्रदेशका गरी २६ जिल्ला जोडिएका छन्।
यो सिमानामा भारतले आफ्नोतर्फ करिब ५० हजारभन्दा बढी सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको छ।
भारतका यी सीमा सुरक्षा पोस्टहरू धेरैजसो त दशगजासँगै जोडिएका छन्, कतिपय लगभग एक किलोमिटरको दूरीमा छन्। कतिपय ठाउँमा त नेपालीको आँगनमै बसेर उनीहरूले पहरा दिइरहेका हुन्छन्।
नेपालका सुरक्षाकर्मी भने सिमानादेखि निकै टाढा छन् र भारतीयको तुलनामा निकै थोरै पनि।
यहाँसम्म कि नेपाल सशस्त्र प्रहरीका कतिपय सीमा सुरक्षा बलका मुख्यालयहरू बसेको ठाउँबाट सिमानामा पुग्नै ५-७ घण्टा लाग्छ।
सीमाविदका अनुसार यस्तो अवस्थामा बिओपी स्थापना गर्दा भौगोलिक अवस्थासँगै ‘काउन्टर पार्ट’बाट हुने सुरक्षा चुनौती मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यसमा आधुनिक हतियार तथा प्रविधिहरू प्रयोग गर्न पनि आवश्यक हुन सक्छ।
‘देश भनेको आफ्नो घर हो, घरको सुरक्षामा अधिकतम् प्रयास गर्नु राज्यको दायित्व हो, सँगसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक छ, जनशक्ति थपेर मात्र हुँदैन, भोलि हतियार तथा गोलीगठ्ठा लुटिने डर हुन सक्छ, सीमा सुरक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू समेत बुझेर बिओपी बनाउन जरुरी छ,’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा सीमाविद् ध्रुवबहादुर प्रधान भन्छन्।
‘सिमाना’को कुरा जोडतोडले उठाउन कोरोना महामारीले सघाउ पुर्‍याएको छ। खुला सिमानाका कारण भारतबाट धेरै मानिस नेपाल भित्रिए। ती धेरैजसो त नेपाली नै थिए, जो भारतमा मजदुरीका लागि गएका थिए।
त्यसरी भित्रिनेले महामारी फैलाउन मद्दत गरेको निष्कर्षपछि सीमा सुरक्षाको प्रसङ्गमा सरकार तात्तिएको हो।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले ३४ हजार जनशक्ति छ। लकडाउन सुरू भएपछि यसको ८० प्रतिशत जनशक्ति सीमामा परिचालन गरिएको दाबी सशस्त्रको छ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्रेष्ठका अनुसार यो जनशक्तिमध्ये २२ हजार बढी सीमामै परिचालन भएको छ।
‘अहिले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा ३१ हजार जनशक्ति खटिएको छ, त्यसमध्ये २२ हजारचाहिँ सीमा नाकामा छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सीमा नाकालाई लामो समय सिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विशेषगरी, प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेश भारतसँग जोडिएका छन्।
त्यसबाहेक ३ र ४ नम्बर प्रदेश पनि आंशिक रूपमा भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्र हुन्। अहिले १,२,५ र ७ मा सशस्त्र प्रहरी प्रभावकारी रूपमा सीमामै खटिएको श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार सशस्त्र प्रहरी ७७ वटै जिल्लामा छ। भन्सार राजश्व गस्ती र सीमा सुरक्षाबाहेक विपदमा आवश्यक हुने ठानेर सशस्त्र प्रहरीलाई विस्तार गरिएको छ। तर, विपदमा सशस्त्र प्रहरीको मात्र नभएर नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको ‘समानान्तर’ जनशक्ति खटिने गरेको छ।
अहिले सीमामा परिचालित जनशक्ति सशस्त्र प्रहरी गुल्म, भन्सार राजश्व गस्तीकै हो। ‘आवश्यकताअनुसार त्यहाँबाटै डिउटी खटाइन्थ्यो,’ श्रेष्ठले भने।
गृहको निर्णयअनुसार कारागार सुरक्षा हेरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षामा खटिन्छ। यसबाहेक औद्योगिक सुरक्षा, विकास निर्माणलगायत ठाउँका सशस्त्रका युनिटहरू उठ्छन्। १३ वटा भन्सार राजश्व गुल्म र ५ वटा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गुल्म यसै आर्थिक मसान्तबाट हट्दैछन्।